July 5, 2020 2093
आइतबार सुनचाँदीको मुल्यमा कुनै घ’टबढ भएको छैन । शुक्रबार प्रतितोला ९० हजार ५०० रुपैयाँमा कारा्ेबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज स्थीर रही सोही मूल्य’मा नै कायम रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसा’यी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज आज तेजा’वी सुनको मुल्य प्रतितो’ला ९० हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मुल्य पनि स्थीर रहेको छ । आज चाँदी प्रति’तोला ९४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्….
सोमबारबाट बजारमा आउने ५० रुपैयाँको नयाँ नोट आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० रुपैयाँ दरका न’याँ भोली देखी बजारमा ल्याउने भएको हो ।
सूचना सार्वजनिक जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० दरका नयाँ नोट बजारमा पठाउने जनाएको हो ।ती नोटमा निवर्त’मान गभर्नर डा। चिरञ्जिबी नेपालको हस्ताक्षर रहने जनाइएको छ ।
नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर रहेका नयाँ नोटहरु भने आगामी कात्तिकबाट बजारमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले जनाए’को छ ।उक्त नोटहरुमा अघिल्लो भा’गमा सगरमाथाको चित्र र लालीगुँरासको पानी छाप रहेको छ भने नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा नेपा’लीमा वि।सं २०७५ लेखिएको छ ।
अर्को भा’गमा हिउँ चितुवाको चित्र रहेको’ छ । बैकंका अनुसार नोटको मध्य भागमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिएको हुने छ । बंकले सर्वसाधारणको जानकारीका लागी यो सुचना प्रका’शित गरेको हो ।
Prevकाठमाण्डौंमा पनि फेसबूक लाइभ’मा आएर एक युवतीले गरिन आत्मह’त्या (भिडियोसहित)
Nextरक्सी’ले मताएर काठमाडौँमा युवतीलाई यस्तो गरेपछि….
काठमाडौँको एक कोठामा बाउ-छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिए, परिवारको यस्तो हाल (भिडियो सहित)
साउदी सरकारले विदेशी कामदारको लागि सुरु गर्यो यस्तो प्रकृया , पूरा पढ्नुहोस्
रुकुम घट’नाले देशनै रोईरहँदा…शिशिर भण्डारी लाखौं बोकेर कहाँ पुगे ? (भिडियोसहित)
प्रहरीले पिछा गरेपछि १५ किलो ‘सुन’ र हति’यार फालेर तस्करहरु फरार